Blackbox: Ultra-mwenje hwindo maneja | Kubva kuLinux
Mazhinji ekuparadzirwa kunonyanya kushandiswa kwe Linux inosanganisira nekutadza chero iyo KDE kana the GNOME. Vanhu vazhinji havazive nezvekuvapo kwezvakasiyana dzimwe nzira «chiedza«; windows mamaneja (windows maneja) ayo anopa akafanana mashandiro asi zvakanyanya kurerutswa uye nekukurumidza. Imwe yedzimwe nzira inodaidzwa nhema bhokisi, baba ve Openbox y Fluxbox.
Blackbox ndeye minimalist hwindo maneja eUNIX-senge masystem, akanyorwa zvachose kubva pakutanga naBrad Hughes pasi peC ++ chirongwa chemutauro.
Kubatsira kwayo kukuru ndeyezvishoma zvigadzirwa zvehardware, ndosaka iri imwe yesarudzo dzakanakisa dzesimba-zviwanikwa kana zvakaderera-ndangariro masystem (kubva pa1,5 MB kusvika pa2 MB ye RAM, ichipesana neinenge 100 MB yeKDE kana GNOME). .
Iyo yakanakira yakaderera-zviwanikwa michina kana maseva uko uko inongo diki graphical nharaunda inodikanwa kune ese ekuchengetedza mashandiro. Kunyangwe yakaderera yakashandiswa, inogadzirisika, nekuti inotsigira madingindira kuti uigadzirise uye dzimwe sarudzo dzekuchinja kutaridzika kwedesktop.
Izvo zvakanyorwa pasi peC ++ chirongwa chemutauro.
Izvo hazvina kuvakwa pane chero imwe hwindo maneja.
Iyo ine minimalist interface.
Inokutendera iwe kumhanya KDE uye GNOME kunyorera.
Inopa akawanda akasarudzika desktops kana 100% zvigadziriswe nzvimbo dzebasa.
Inosanganisira menyu yekutanga zvirongwa.
Inosanganisira gallery yeatimu dzinoonekwa kuti ugadzirise kutaridzika.
Tinotsigira mifananidzo uye gradients.
Izvo hazvigone kuve nyore:
sudo apt-tora kuisa blackbox nhema bhokisi-misoro
Wobva wabuda kunze uye pachiratidziro chekupinda, pazasi, sarudza iyo Blackbox sarudzo.
Neraki, Blackbox inowanikwa mune dzese zvinyorwa kuzivikanwa kwakanyanya kweLinux. Ingori nyaya yekuiisa uye nekutevera nhanho dzakatsanangurwa mundima yapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Blackbox: Ultra-mwenje hwindo maneja
Steve Jobs aida kuhaya Linus Torvalds makore gumi nemaviri apfuura